Loop & Tie, waxaan si isdaba joog ah uga fikirnaa siyaabo aan uga faa'iideysan karno awoodda tikniyoolajiyadda si ay uga caawiyaan dad badan inay isku xirmaan. Jiidida aan dareemeyno inaan isku aqoonsanno oo aan midba midka kale ugu dabaaldegno hadiyado waa dareen qurux badan, aan waqti lahayn. Adoo siinaya isticmaaleyaasha Salesforce awood ay ugu diraan hadiyado codsigooda, waxaan si dhakhso leh ugu xoojin karnaa khibradaha hibada aadanaha.
Barxadda hadiyadda Loop & Tie waxay abuurtaa waayo-aragnimo macmiil macno leh oo khariidado u ah baahiyaha ganacsiyada ee isu-miisaamidda iyo dabagalka. Dhisida gudaha Salesforce waxay ka caawisaa shirkadaha inay soo gudbiyaan taabasho feker leh oo aasaas u ah cilaaqaadka adag, dhammaantoodna ku dhex jira qaab la socon karo oo ka caawiya macaamiisha inay cabbiraan ROI ee barnaamijyadooda hadiyadeed.